ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့၌ ကြည့်ရှုလေ့လာ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့၌ ကြည့်ရှုလေ့လာ
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် မြန်မာ လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းလှိုင် တို့နှင့်အတူ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဟိုချီမင်းမြို့၌ ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဟိုချီမင်းမြို့ အနောက်ဘက် ဘန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိ ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသို့ ရောက်ရှိကြပြီး VRG KHAI မှ Vice- President Mr. Le Xuan Hoe က ရာဘာစိုက်ပျိုးမှု၊ ကျန်းမာရေးသုံး ရာဘာ လက်အိတ်များနှင့် မိသားစုသုံးရာဘာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် SOVICO Holdings လုပ်ငန်းစုသို့ ရောက်ရှိကြပြီး SOVICO လုပ်ငန်းစုများဖြစ်ကြသော HD Bank, Viet Jet Airline, Phulong လုပ်ငန်းများအား SOVICO Holdings ဥက္ကဋ္ဌ Dr. Nguyen Thanh Hung နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် Saigon Hi- Tech Park သို့ရောက်ရှိကြရာ Board of Management President Mr. Le Hoai Quoc က Hi-Tech နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များက သိရှိလိုသည်များ ပြန်လည်မေးမြန်းကြသည်။